MonetaryUnit စျေး - အွန်လိုင်း MUE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို MonetaryUnit (MUE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ MonetaryUnit (MUE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ MonetaryUnit ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $956 991.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ MonetaryUnit တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
MonetaryUnit များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
MonetaryUnitMUE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00623MonetaryUnitMUE သို့ ယူရိုEUR€0.00527MonetaryUnitMUE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00475MonetaryUnitMUE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00566MonetaryUnitMUE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0554MonetaryUnitMUE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0392MonetaryUnitMUE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.137MonetaryUnitMUE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0231MonetaryUnitMUE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00825MonetaryUnitMUE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0087MonetaryUnitMUE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.137MonetaryUnitMUE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0483MonetaryUnitMUE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0335MonetaryUnitMUE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.467MonetaryUnitMUE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.1.05MonetaryUnitMUE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00854MonetaryUnitMUE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00951MonetaryUnitMUE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.194MonetaryUnitMUE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0433MonetaryUnitMUE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.664MonetaryUnitMUE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩7.39MonetaryUnitMUE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦2.41MonetaryUnitMUE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.455MonetaryUnitMUE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.17
MonetaryUnitMUE သို့ BitcoinBTC0.0000005 MonetaryUnitMUE သို့ EthereumETH0.00002 MonetaryUnitMUE သို့ LitecoinLTC0.000115 MonetaryUnitMUE သို့ DigitalCashDASH0.00007 MonetaryUnitMUE သို့ MoneroXMR0.00007 MonetaryUnitMUE သို့ NxtNXT0.486 MonetaryUnitMUE သို့ Ethereum ClassicETC0.000918 MonetaryUnitMUE သို့ DogecoinDOGE1.8 MonetaryUnitMUE သို့ ZCashZEC0.00008 MonetaryUnitMUE သို့ BitsharesBTS0.192 MonetaryUnitMUE သို့ DigiByteDGB0.199 MonetaryUnitMUE သို့ RippleXRP0.0221 MonetaryUnitMUE သို့ BitcoinDarkBTCD0.000215 MonetaryUnitMUE သို့ PeerCoinPPC0.0207 MonetaryUnitMUE သို့ CraigsCoinCRAIG2.84 MonetaryUnitMUE သို့ BitstakeXBS0.266 MonetaryUnitMUE သို့ PayCoinXPY0.109 MonetaryUnitMUE သို့ ProsperCoinPRC0.782 MonetaryUnitMUE သို့ YbCoinYBC0.000003 MonetaryUnitMUE သို့ DarkKushDANK2 MonetaryUnitMUE သို့ GiveCoinGIVE13.5 MonetaryUnitMUE သို့ KoboCoinKOBO1.42 MonetaryUnitMUE သို့ DarkTokenDT0.00574 MonetaryUnitMUE သို့ CETUS CoinCETI18